Shabaab oo dusha u ritay weerar Mandheera ka dhacay | Gedoonline
Shabaab oo dusha u ritay weerar Mandheera ka dhacay	Added by Editor on July 30, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho(GMN)-Abdicaziz Abuu Muscab oo ah Afhayeen Shabaab dhanka Hawlgalladd oo u la hadlay bar enternet Shabaab ay ku leeyihiin ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka danbeyeen weerar Miino oo Maanta oo Isniin ah ka dhacay Degmadda Mandheera.
Afhayeenka ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen Saraakiil ka tirsan Dowladda Kenya halka uu sheegay inay ku gubeen gadiid kuwa Booliska ah.
Muscab ayaa sheegay inay sii wadi doonaan qaraxyo uu sheegay inay ku beegsanayaan gadiidka Saraakiisha Dowladda Soomaaliya.
Maanta ayaa qarax miino waxaa uu ka dhacay Degmadda Mandheera kaasi oo la sheegay in waxyeelo ay ka soo gaartay ciidamo ka tirsan Dowladda Kenya.
Shabaab oo dusha u ritay Qaraxyada Muqdisho
Qarax waxyeelo geystay oo ka dhacay Mandheera
Ciidamo Kenyan oo la soo dhoobay Mandheera
Shabaab oo weerar ku qaaday Mandheere
Dag dag: Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay Mandheera